लकडाउनमा मालामाल मिना (भिडियो सहित)
विराटनगर । गायिका मिना कार्कीको एल्बम सदिक्षा भित्र समावेश दोस्रो गीत ‘मायामा मालामाल’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ।
प्रेम भावको यस गीतमा स्वर सन्तोष श्रेष्ठ र मिना कार्कीको रहेको छ ।
गीतका शब्द डा.नवि अधिकारी (टकिन्द्र)ले लेखेका हुन् भने संगीत गायक तथा संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको रहेको छ । गीतमा देवेन्द्र नेवाले संगीत संयोजन गरेका हुन्।
म्युजिक भिडियोमा कमल सिंह र नग्मा श्रेष्ठ फिचर्ड छन् । सन्तोष राजबाहकको कोरियोग्राफी तथा निर्देशनमा बनेको भिडियोलाई उत्सव दाहालले छायाँकन र टेकेन्द्र शाहले सम्पादन गरेका हुन्। ओएसार डिजिटल मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो।
यसअघि आफ्नो पहिलो गीत ुशिरमा शिरफुलु सार्वजनिक गरेकी गायिका कार्की पेशागत हिसाबले एक अनुसन्धानकर्ता, सक्रिय स्वास्थ्यकर्मी, र सिनियर नर्स पनि हुन्। एल्बम ूसदिक्षाू भित्रका प्रत्येक गीतका म्युजिक भिडियो क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जाने गायिका कार्कीले जानकारी गराएकी छन् ।
म्युजिक भिडियोलाई दर्शक ,स्रोताको सकारात्मक प्राप्त भैरहेको छ। म्युजिक भिडियोलाई माया गरिदिन गायिका कार्कीले सम्पूर्ण संगीत प्रेमी र मिडिया हाउसलाई आग्रह गरेकी छिन।
आइतबार, २१ असार, २०७७, रातीको ०८:३२ बजे
तिम्बुपोखरी जाने सिजन सुरु
पाँचथर । पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका र ताप्लेजुङको सिदिङमा गाउँपालिकाको सिमानास्थल तिम्बुपोखरीमा वर्षायामको समयमा पर्यटनको आकर्षण हुने गरेको छ । समुद्री सहतबाट ४ हजार ३३८ मिटरको उचाइमा रहेको त्यस ठाउँमा ४ सय मिटर लम्बाइ र २ सय मिटर चौडाइ भएको आकर्षक
टिकटकमा रुचाइएका सुदेशका सन्देशमूलक ‘छन्द कविता’
विराटनगर । लुट्नेले जब अस्मिता लुटिसके, के लुट्न बाँकी छ र ? लाग्यो इज्जतमाथि दाग अब हे धोएर के जान्छ र ? गर्भैमा तुहिँदै छ जीवन कतै, जज्मिन्छ छोरी भनि बच्चामै यसरी बलात्कृत हुँदा काँप्दै छ धर्ती पनि महिला माथि
विराटनगर । छैठौं संस्करणको मिस कोशी प्रतियोगिताकोमा पहिलो चरणको अडिसनबाट १७ जना किशोरी छनौट भएका छन् । विराटनगर र इटहरीमा भएको पहिलो चरणको अनलाइन र भौतिक रूपमा लिएको अडिसनमा ३१ जना किशोरी सहभागीमध्ये १७ जनालाई फाइनलको लागि छनौट गरिएको हो
स्टाईलिस गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन
काठमाडौं । एक जमानाका चर्चित र स्टाइलिस गायक मानिएका बरिष्ठ संगीतकार एवं गायक प्रेमध्वज प्रधानको आज बिहान निधन भएको छ । सास फेर्न गाह्रो भएको र छातीमा समस्या देखिएपछि उनलाई बिहानै बसुन्धरास्थित न्यूरो अस्पताल पुर्याइएको थियो । अस्पतालमा उपचारको क्रममा
किरण र अस्मिताको यस्तो सपना …
विराटनगर । नवगायक किरण भुजेल र अस्मिता अधिकारीको स्वरमा रहेको सपना बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । भवसागर इन्टरटेनमेन्टको युटुव च्यानलमार्फत सार्वजनिक उक्त गीतको भिडियो छायाङ्कन भने नेपालका विभिन्न ठाउँमा गरिएको छ । अम्बिका गुरुङले लेख्नु भएको गीतको शब्दमा शंकर
मनका स्वरहरूमाथि विमर्श
विराटनगर । कवि रामबाबु दाहालद्वारा लिखित ‘मनका स्वरहरू’ नामक कविता सङ्ग्रहमाथि विराटनगरमा विमर्श गरिएको छ । विराटनगरस्थित एलिट क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा मनका स्वरहरू सङ्ग्रहभित्रका कविताहरूका विषयमा विमर्श गरिएको हो । कार्यक्रममा कृतिमाथि समीक्षा गर्दै कवि सीमा आभासले दाहालका कविताले काव्यिक
यस्तो छ विराटनगरमा १९ र २० गतेको खोप तालिका
कसले सुधार्नु पर्ने जनता मावि ?
फाटेको टालोले छोपेको छर्लङ्गै देखियो
निषेधाज्ञा लगाउने मोरङ प्रशासनको चेतावनी
फेरि संकटमा परे शंकर पोखरेल, सत्ताच्यूत बन्ने खतरा बढ्यो
मध्यरातमा खोप बोकेर कार्यकर्ताको घर पुगेका विराटनगरका मेयर स्थानीयद्वारा लखेटिए
विराटनगरका दश विद्यालय नमूना बन्ने चरणमा : नगरप्रमुख पराजुली
जग्गा कारोबारी रमेश यादवको दोहोरो नागरिकता, २ लाखमा किनेको दाबी
सुनपसल लुटपाट गर्नखोज्ने पक्राउ
कुदाककाउले ताँबुमा पुग्यो बिजुली, स्थानीयमा खुसीयाली